Steel Strip, Steel Ukupakisha Umtya, Isefu Steel Strip, Iron Ukupakisha Strip - JinHe Metal
Yokubhaka Blued Steel Ukupakisha Umtya
Yokubhaka Paint Iron Umtya
Kwalenza Iron ezweni ukuba
Iron Natural Ukupakisha Umtya
ezweni ukuba steel
Anombala wax Iron Umtya
Ukugcinwa Iron ezweni ukuba
Iron ezweni Kulula kakhulu ukuba corrosion.What sifanele sinikele ingqalelo xa igcina ezweni yentsimbi? 1.When lo ezweni wentsimbi eDibanisa okuninzi, kufuneka kubekho kungekho manzi yinto enye phezu komhlaba. 2.The emoyeni kwegazi kufuneka zigcinwe yokugcina apho ezweni intsimbi igcinwe. -Rel- ...
Kutheni kukho ROOTN xa ukupakisha nge bundl ...
Kutheni kukho ROOTN kwinkqubo ebezithunyelwe? Yintoni isizathu sokuba ROOTN? Hamba nam ukufumana impendulo: Ukupakisha umtya kubizwa ngokuba bundle. Yenziwe polyethylene, ezinepolypropylene resin, strip ebandayo-liqengqiwe, njengoko izinto eziphambili ekrwada, kwakunye nenayiloni kunye ipholiyesta. extruded indlela enye-eqine ...
Gaomi JinHe Metal Products Factory ise idolophu Mo Yan, oyiphumeleleyo iBhaso yeNobel ngo Literature ehlabathini - Gaomi City, Shandong Province.It kukuba ukuya entshona Qingdao (Qingdao Port) kwaye ngasempumalanga WeiFang sixeko . JiaoJi zikaloliwe QingYin Expressway cross Gaomi City ngendawo ezibalaseleyo kunye nokuthuthwa lula.
ADD: Idilesi: 666 Ekhaya Textile Road, isixeko gaomi, kwiPhondo Shandong